Shiikh Bashiir ayaa ayaa u aaneeyay soo gelitaanka Ciidamada shisheeye ee dalka Xarakada Shabaab isagoona sheegey in ay ku gacan seeureen sidii nabad dalkan loogu soo dabbaali lahaa.
Mas’uuliyadda arrintan waxaa qaadaya Xarakada Shabaab” ayuu yiri Guddoomiyaha Hay’adda Culumada Soomaaliyeed isagoona intaa raaciyay in ay jireen dadaalo badan oo lagu doonayay in lagu dhex dhexaadiyo dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Xarakada shabaab taasoo shabaabku ay dideen .
Hay’addan Culumada Soomaaliyeed ayaa hore ugu dhawaaqday in ay diyaar u tahay in ay isku keento dhinacyada wadanak ku dagaalamaya hase yeeshee waa ay ku guul daraysatay in arrintaa ay meel mariso.
Hadalkan Guddoomiyaha Hay’adda ayaa imaanaya xilli Dagaaladii Muqdisho ay haatan isku bedeleen qaraxyo ka gadaal markii xarakada shabaab ay sheegeen in ay bedeleen qaabkii ay kula dagaalamayeen ciidamada dawladda iyo kuwa amisom oo ay doonayeen in ay af genbiyaan.
Si kastaba dadaalka hay’adda ayaan hore u noqon mid mira dhal ah taasoo iminka ku soo ururey Eedeymo ay u soo jeediso Xarakada Shabaab oo ay ku eedeyneyso in iayadu ay qaadato mas’uuliyadda Ciidamada shisheeye ee dalka soo galay oo ay sheegeen in ay iyagu u durbaan tumeen.